International Virtual Cadaster Symposium - Geofumadas
Julaị, 2012 cadastre, Akụziri CAD / GIS, Land Management
Site na nkwado nke Association of Geographers of Peru na UNIGIS, Geowebss na-egosi usoro isiokwu ahụ «Ọnọdụ dị ugbu a nke cadastre na ozi na ụzọ mmeghari ohuru nke telematic«, Nke ga - eme na Fraịde 10 na Satọdee 11 August 2012. A ga - eme ihe omume ihu na Peru ma ndị ọrụ si n'akụkụ ụwa niile ga - enwe ike isonye na ọ fọrọ nke nta.
O yiri anyị ezigbo atụmatụ, nke dabara na oge dị mma nke Peru na-enweta n'afọ ndị na-adịbeghị anya na nsogbu nke ụwa. Ọtụtụ mba Latin America na-eme usoro yiri nke a, mana nkwado ha na-ejedebe obere obere na njikọta nke akwa ahụ metụtara ụlọ ọrụ nkeonwe na ụlọ ọrụ ọha na eze na agụmakwụkwọ.
Sharingkesa ahụmịhe nke mba niile bụ atụmatụ dị mma iji bulie ihe ị nwere ma mụta ihe ndị ọzọ rụpụtara, nke ahụ bụkwa otu ebumnuche nke emume a.
Ndokwa ahụ gụnyere ụbọchị abụọ siri ike, nke ọ bara uru itinye aka na ọfịs ma ọ bụ ụlọ site na ikpo okwu mebere:
Na Fraịde, a na-etinye ihe ngosi mpaghara, n'ime usoro nke ọgbara ọhụrụ nke gọọmentị nke Peru kwalitere site na Iwu Iwu nke Integrated National Property Cadastral Information System. A ga-egosikwa ọganihu na teknụzụ na ọdụ nyocha na-adịgide adịgide.
Mgbe emechara nri ehihie ahụmịhe na Honduras ka a ga-egosipụta site na iji nwayọ nwayọ nke akụkụ dị iche iche nke cadastre maka mmepe obodo.
08: 30 - 10: 00 Enyemaka Ndebanye aha na Platform Conference Platform
10: 00 - 10: 10 Emepe Ememe
Dean nke College of Geographers of Peru
10: 10 - 10: 50 Cadastre ime obodo nke taa na PERU.
Banyere owuwu nke ihe omuma ohuru maka nkwadebe, ochichi na nhazi nke ihe omuma - Digital Cadastre
Onye osote onye isi njikwa Cadastre - Obodo nke Miraflores
Onye nnọchi anya AMPE (Association nke Obodo nke Peru)
10: 50 - 11: 20 Ngwurugwu Multipurpose Cadastre n'okpuru Iwu 28294 - SNCP - Peru
Onye bụbu onye odeakwụkwọ ọrụ SNCP - Onye bụbu onye nchịkwa Cadastre
11: 20 - 11: 40 Ezumike kọfị
11: 40 - 12: 20 Teknụzụ ozi (IT) na-arụ ọrụ nke Cadastre na Peru
María Reyes Amenero
12: 20 - 13: 00 Satellite Geodesy na Peru (Ebighebi Usoro Ọgbọ)
Ing. Ruddy Reza. - Ngwọta RTK
13: 00 - 14: 30 OGWU
14: 30 - 15: 10 Ngwa Nzuzo nke Multi-nzube Cadastre maka Ọchịchị Obodo
Onye na-ahụ maka mmemme na - ewusi ndị ọchịchị ike na Honduras
15: 10 - 15: 20 Ajụjụ Wheel
Moisés Poyatos ga-ewetara ahụmịhe na usoro eji ihe onyonyo edepụtara, dabere na ahụmịhe Honduran sitere na ọrụ PROCORREDOR. Anyị anụworị ihe Mozis kwuru na isiokwu nke gvSIG n'ime obodo Guatemala.
Mgbe ahụ enwere ahụmịhe Peruvian / intali na ijikwa onyonyo satịlaịtị; Lọ ọrụ Lincoln ga-ewetara isiokwu nke atụmatụ ihe onwunwe na ụtụ na ahụmịhe Uruguayan na Bolivia isiokwu nke usoro atụmatụ maka iwusi ike ọchịchị obodo.
Ọ dịkwa ụtọ, ngosipụta nke Rafael Beltrta, ya na MuNet oru ngo nke kwalitere OAS n'ọtụtụ obodo Latin America na mmega ahụ nwere njikọ na ESRI, Trimble na Stewart Solutions.
N'ikpeazụ, UNIGIS ga-akọwa etu usoro nnabata si arụ ọrụ na mpaghara Geographic Information Systems.
Agenda anwụ Satọde
9: 20 - 10: 20 Njikwa sonyere
10: 20 - 11: 00 Rithazi Territorial, Nnyocha Cadastral na Orthophoto
Ọkachamara na GIS na Territorial Planning
11: 00 - 11: 40 Ihe Satọde
11: 40 - 12: 10 Cadastre, Cadastre Valuation na Tax Ngwongwo - Uruguay
Onye nkuzi nke Lincoln Institute of Land Policy
12: 10 - 13: 00 Ha haziri ngwa agha, nhazi na ọrụ aka iji kwado ma kwado obodo - Bolivia
13: 00 - 14: 20 Ezumike kọfị
14: 20 - 15: 00 Oru ngo dikwa nma na uzo ogbe doro anya, MuNet Cadastre - Organisation of America States -OEA
Rafael J. Beltrta Ramallo
15: 00 - 15: 40 UNIGIS na Latin America, Master na Geographic Information Systems
Onye nnọchi anya UNIGIS sitere na Latin America
15: 40 - 15: 50 EGO
Maka ama ndi ozo:
I nwekwara ike iso ihe omume n’ime Facebook na LinkedIn
Previous Post«Previous Usoro ArcGIS etinyere na Nchọpụta ịnweta
Next Post Ipaq PC na Topography na ọdụ ụgbọ oloko na Ebe NiileNext »